Jamie Carragher Oo Magacaabay 10ka Weeraryahan Ee Abid Ugu Fiican Premier League & Dood Badan Oo Ka Dhalatay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJamie Carragher Oo Magacaabay 10ka Weeraryahan Ee Abid Ugu Fiican Premier League & Dood Badan Oo Ka Dhalatay
Jamie Carragher Oo Magacaabay 10ka Weeraryahan Ee Abid Ugu Fiican Premier League & Dood Badan Oo Ka Dhalatay
April 2, 2021 admin Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 1
Warka ku saabsan in Sergio Aguero uu ka tagayo Manchester City ayaa keentay in daaficii hore ee Liverpool uu ka fekero 10kii weeraryahan ee ugu fiicnaa horyaalka Premier League.
Aguero ayaa lagu xusuusan doonaa inuu ka mid yahay weeraryahanadii ugu fiicnaa ee soo maray horyaalka Premier League isagoo ka tagay Man City oo uu ka noqday xiddiga ugu goolasha badan ka dib markii uu u dhaliyay 257 gool 384 kulan uu saftay.
Carragher ayaa ka horyimid qaar ka mid ah weeraryahanadii ugu fiicnaa Premier League isagoo Liverpool u dheelay 737 kulan intii u dhaxeysay 1996 ilaa 2013.
Daaficii hore ee England ayaa wargeyska Telegraph ku soo bandhigay fekerkiisa ah 10ka weeraryahan ee abid ugu fiican Premier League, isagoo ku qiimeeyay goolasha ay dhaliyeen, tirada koobabka ay qaadeen iyo qiimaha ay goolashooda u lahaayeen in koobab lagu qaado.
Kaalinta 10aad waxaa soo galay xiddiga Tottenham Harry Kane madaama uu dhaliyay 175 gool inkastoo uusan weli wax koob ah ku guuleysanin.
Carragher ayaa ku dooday in Kane oo dhaawacyo ka badbaada inuu jabin doono rikoodhka goolasha Premier League ee Alan Shearer ee 260 gool iyo rikoodhka goolasha Wayne Rooney ee xulka England ee 53 gool.
Kaalinta 9aa waxaa soo galay weeraryahankii hore ee Man United Dwight Yorke halka xiddigii hore ee Liverpool Luis Suarez uu soo galay kaalinta 8aad, waxaa 7aad soo galay xiddigii hor eee Man United Andy Cole.
Waxaa lixaad soo galay xiddiga Liverpool Mohamed Salah, waana halka dooda badan dhalisay.
Carragher ayaa qirtay in Salah uusan aheyn No.9 balse hamigiisa uu yahay mar walba inuu goolal dhaliyo. Salah ayaa dhaliyay 119 gool 192 kulan uu u saftay Reds isagoo ku guuleystay midkood Kabta Dahabka, Champions League ama Premier League mid kasta oo ka mid ah seddexdii xilli ciyaareed ee uu joogay Merseyside.
Carragher ayaa kaalinta shanaad u magacaabay Wayne Rooney oo noqday xiddiga ugu goolasha badan Manchester United islamarkaana shan koob oo Premier League ah ku guuleystay.
Afaraad waxaa soo galay Didier Drogba oo koobab badan ku hogaamiyay Chelsea islamarkaana ahaa xiddig ismuujin jiray kulamada waa weyn.
Waxaa seddexaad soo galay xiddiga ugu goolasha badan taariikhda Premier League Alan Shearer kaasoo dhaluyay 260 gool laakiin Carragher ayaa sheegay in sababtii uu seddexaad u soo geliyay inay tahay inuusan ku guuleysanin koobab badan.
Kaalinta labaad waxaa soo galay Sergio Aguero oo soo saaray Manchester City kana dhigay kooxda ay maanta tahay. Kaalinta koowaad waxaa uu geliyay Thiery Henry isagoo sheegay inaysan taasi dood ka taagneyn inuu yahay weeraryahankii ugu fiicnaa abid ee taariikhda Premier League.
Laakiin Carragher ayaa liiskiisa ka reebay halyeeyga Arsenal Dennis Bergkamp iyo halyeeyga Man United Eric Cantona.
10ka Weeraryahan Ee Ugu Fiican Premier League Ee Jamie Carragher:
Duale cagalab says:
Sxb Isla illaw salax iyo Kuwa kale ee waa inaad soo qaadataa mr/ing,Danis bergham mashiinkii kubada cagta premiere leage